के सबै शुरुआतीहरूले खोजी इञ्जिन अनुकूलन ट्यूटोरियल चाहिन्छ?
खोजी इन्जिन अनुकूलन ट्यूटोरियल एक महान उपकरण हो जसले शुरुवात जानकारीसँग शुरुवातहरू प्रदान गर्दछ जुन तिनीहरूलाई पहिलो-कक्षा एसईओमा पुग्न आवश्यक छ।. दुर्भाग्यवश, सबै एसईओ ट्यूटोरियलहरू बराबर बनाइएन. यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई एसईओ गाइडहरू बीचको विचार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई र ती फाइदा उठाउनेछ जुन तपाईंको समय बर्बाद गर्नेछ.
अनगिन्ती घण्टा बर्बाद नगर्नुहोस् जस्तै धेरै एसईओ उपन्यासहरू गर्छन. आज, सेल्टल्ट विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई गुणवत्ता खोज इन्जिन अनुकूलन ट्यूटोरियल कस्तो देखिन्छ भनेर कसरी एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान गर्नेछ.
कसरी Google वर्क्सको सरल व्याख्या
एसईओ सिक्ने बेलामा, तपाइँलाई के गर्नु आवश्यक छ, यो आज विकसित भएको छ. एकपटक तपाईंले गन्तब्यको विकास गरेपछि, तपाइँले कसरी Google वेबसाइटहरू वेबसाइटहरू बुझ्न बुझ्न सजिलो हुनेछ.
कुनै इन्कार छैन कि Google एक शानदार कम्पनी हो. यद्यपि, एल्गोरिदमको परिष्कृत गर्दा तिनीहरूले लेख्न अविश्वसनीय छ, एसईओ को इतिहास मा धेरै टाढा को लागी कुनै को आवश्यकता छैन, खासकर यदि तपाईं SEO नौसिखिया हुनुहुन्छ.
जब तपाई एसईओ को दुनिया को अन्वेषण गर्न शुरू गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई यो Google लाई स्पष्ट गर्न को लागी चाहिए कि तपाईंको वेबसाइट सबै को बारे मा छ. गुगललाई सम्झौता गर्नुहोस् कि तपाईंको स्रोत लोकप्रिय छ र पहिलो-पृष्ठको स्तर निर्धारण योग्य छ. यो लक्ष्य पुग्न, तपाइँ एक पेशेवर एसईओ रणनीति को पालन गर्नु पर्छ जुन सामान्य एसईओ ट्यूटोरियल मा प्रदान गरिएको छ.
Google लाई कसरी तपाईंको साइटलाई प्रेम गर्ने
यद्यपि Google स्मार्ट हो, यो अझै पनि अतिरिक्त मद्दत चाहिन्छ. प्रमुख खोज इन्जिनहरूले वेबमा क्रेल गर्न खोज्नेहरूलाई अझ बढ्दो टेक्नोलोजिम सुधार गर्छ र खोजीकर्ताहरूलाई अधिक मूल्यवान परिणाम फर्काउँछ. तथापि, त्यहाँ Google, Bing, याहू र अन्य खोजी इन्जिनहरूले कसरी काम गर्न सक्दछ भन्ने सीमा छ. जबकि सही एसईओले तपाईंलाई सैकड़ों दर्शकहरू ल्याउन सक्छ र बढ्दो ध्यान दिन सक्छ, गलत चालहरूले खोज परिणाममा गहिरो साधन लुकाउन सक्छ जहाँ दृश्यता लगभग शून्य छ।.
खोज ईन्जिनियरिङ्मा अपील गर्न सामग्री बनाउन को लागी, एसईओले रेटिङ बढाउन मद्दत गर्दछ ताकि सामग्री राखीनेछ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले अझ धेरै पढ्न पाउनेछन्।. किनकि इन्टरनेट बढ्दो प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, एसईओ प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूले Google द्वारा देखा पर्ने राम्रो मौका पाएका छन्.
के खोज इन्जिन अनुकूलन ट्यूटोरियल को लागि पर्याप्त एसईओ को लागि?
एसईओ दुनिया कठिन छैन कि धेरै मानिसहरू सोच्न सक्छन्. तपाईं सजिलै संग एक अभ्यास को आधार मा एक महिना भन्दा कम मा बुझ्न सक्नुहुन्छ. पनि एक सानो ज्ञानले तपाईंको व्यवसायमा ठूलो भिन्नता बनाउन सक्छ.
2017 मा, नि: शुल्क एसईओ शिक्षा इन्टरनेटमा व्यापक रूपमा उपलब्ध छ. तपाईं केहि सेकेन्डमा धेरै खोजी इन्जिन अनुकूलन ट्यूटोरियलहरू र चरण-दर-निर्देश गाइड फेला पार्न सक्नुहुनेछ तपाईको सोफे छोडेर बिना. यो सानो अभ्यास संग मिश्रण गर्नुहोस्, र तपाईं एक एसईओ विशेषज्ञ बनने को तरिका मा राम्रो तरिकाले हो.
तपाईले देख्न सक्नु भएको छ, यो एसईओ को मुख्य अवधारणाहरु को एक मूल ज्ञान को लागी राम्रो छ, र खोज इन्जिन अनुकूलन ट्यूटोरियल तपाईं उन अवधारणाहरु लाई तेजी देखि सीख सकते हो Source .